हामी प्रमाणित छौं कि मार्केटिंग टेक्नोलोजीमा रुचि बढ्दैछ! | Martech Zone
हाम्रो दर्शक बढ्दै छ। थोरै होइन यो क्रमशः पछिल्लो दशकमा भयो। यो प्रत्येक एक महिनामा बढ्दै छ किनकि धेरै भन्दा धेरै कम्पनीहरूले निर्णयहरूको साथ अभिभूत हुन्छन् जुन यस सम्बन्धमा आवश्यक छ बजार टेक्नोलोजी.
Martech Zone लगभग यसको पहुँच बढेको छ %०% वर्ष बर्ष... औसत १०,००० भन्दा बढि मासिक संगै ~ 75,000 ईमेल सदस्यहरू (अब हामी सक्रिय छौं सर्कप्रेस - हामी WordPress को लागी ईमेल प्लेटफर्म) बनाए। हाम्रो twitter, फेसबुक, गुगल र व्यक्तिगत खाता साथै फुल्न जारी राख्नुहोस्। हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग बढ्दै छ र हाम्रो संयुक्त पोडकास्टसँग वेब रेडियोको किनारा पछिल्ला दुई वर्षमा ,3,000,000००,००० भन्दा बढी सुन्न पुगेको छ। वाह!
भेन्चर बीटले हालैमा फन्डिंगको राज्यको बारेमा उल्लेखनीय लेख गर्यो मार्केटिंग टेक्नोलोजी उद्योग.
खराब समाचार यो हो कि funding .49.1.१ अर्ब डलरको लगानी छरिएर funding 537 technology मार्केटिंग टेक्नोलोजी उत्पादनहरूको बिखण्डन छ, जसले ठूलो रकम प्राप्त गरेको छ। त्यो मुख्यतया, अवश्य पनि, सिलिकन भ्याली बबल बाहिर हुनेछ।
यो पनि ढिलो भइरहेको छैन, कि त। स्कट ब्रिंकर रिपोर्टहरू मार्केटिंग टेक्नोलोजीका लागि $ २१. billion बिलियन भन्दा बढी कोष... मतलब उपकरण र टेक्नोलोजीको एक तरंग कुनाको वरिपरि छन्!
किन चासो बढिरहेको छ?
खोज - कम्पनीहरूले समाधान विकास गर्दै र मूल्यवान उपकरणहरू निर्माण गर्न सुरू गरिरहेछन् जुन वास्तवमै कम्पनीहरूलाई उनीहरूको विपणन प्रयासहरू परिमार्जन गर्न र मापन गर्न मद्दत गर्दछ। सही उपकरणहरू खोज्दै - विशाल चयनको साथ VB माथि उल्लेख गरे जस्तो, गाह्रो छ।
चयन - त्यहाँ हजारौं समाधानहरू छन्! मलाई लाग्दैन कि यो आश्चर्यजनक हो कि परिदृश्य ठूलो मात्रामा सपाट र फराकिलो छ। कम्पनीहरूसँग प्लेटफार्महरू फेला पार्ने अवसर छ जुन उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन् बरु एक-फिट-फिट-सबै समाधान किन्नुहोस् जुन उनीहरूको प्रक्रियाहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
मूल्य - आईटीको लागि मूल्य गिरावट आएको छ तर मार्केटिंग टेक्नोलोजीको मूल्य उस्तै नै छ वा बढेको छ। यो मेरो विचारमा बबल हो, र हामी अवलोकन र साझा गरिरहेका छौं धेरै नयाँ, सस्तो उपकरणहरू जुन सुविधा सम्पन्न र अवस्थित प्लेटफर्महरूसँग प्रतिस्पर्धी जुन पुरानो, फूलेको र महँगो छ।
सजिलो प्रयोग - यदि तपाईंले केहि बर्ष पहिले मार्केटिंग अटोमेसन प्रणाली खरीद गर्नुभयो भने, तपाईंलाई अत्यधिक-टेक्निकल स्टाफमा लगानी गर्न आवश्यक छ कि समाधानलाई डिप्लोय र प्रबन्ध गर्न। अब यति धेरै छैन। नयाँ समाधानहरू प्रयोग गर्न र प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो भइरहेको छ, त्यसैले व्यवसायहरू अन्तरिक्षमा अधिक लगानी गर्न खुला छन् किनभने त्यहाँ प्रवेश गर्न महँगो बाधा छैन।
त्यसोभए के हराइरहेको छ?
मैले समानता राखेको छु कि मार्केटिंग टेक्नोलोजी बेच्न धेरै छ भोक भोकै व्यक्तिलाई फ्रिजहरू बेच्न जस्तै। फ्रिजहरू सस्तो, प्रशस्त, सुविधा धनी छन्, र एक उत्तम काम गर्न सक्छन्। तर यदि तपाइँसँग खाना छैन भने तिनीहरू लायकका छैनन्। को खाना मार्केटिंग टेक्नोलोजी रणनीति र सामग्री हो जुन तपाईंको व्यवसायलाई ईन्धन दिन आवश्यक छ।
किनभने मार्केटिंग टेक्नोलोजी यति सस्तो र प्रशस्त भएको छ, यसलाई व्यापक रूपमा अपनाइएको छ तर खराब डिप्लोमेन्ट। एक दशक पहिले, एक मार्केटिंग विभाग को सबै कुञ्जी मार्केटिंग टेक्नोलोजी खरीदको साथ बहु-वर्ष रणनीति र मानव संसाधनको योजना बनाइएको हुन्छ। धेरै कम्पनीहरु अब एक रणनीति बिना प्रविधिको तैनात छन्, वा एक रणनीति को बदलीमा। को सामान यो उद्योगमा बेचेको छ केवल गरीब मार्केटर्स लाई अधिक बकवास फैलाउन सक्षम पार्दै छ कि परिणामहरू प्राप्त गरिरहेको छैन।
हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ! र मार्केटिंग टेक्नोलोजीमा प्रकाशनको रूपमा, हामी गत बर्ष परिवर्तन गर्नको लागि केन्द्रित छौं। जब हामी आजका कम्पनीहरूले पिच गरेका छन्, हामी उनीहरूको समाधानको बारेमा लेख्न प्रतिरोधी छौं जबसम्म हामीसँग उनीहरूले पत्ता लगाउन कोशिस गरिरहेका मुख्य समस्याहरू प्रदान गर्ने सूचना नभए र समाधानको लागि कस्तो रणनीति आवश्यक पर्छ। यो सुविधाहरूको बारेमा होईन, यो फाइदाहरूको बारेमा हो।
त्यसो भए के हो?
हामी अझै उभिरहेका छैनौं र हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न हाम्रो रणनीतिहरूमा धेरै समय र प्रयास लगानी गर्दै छौं ... यहाँ के कुना वरिपरि आउँदैछः
साइट पुन: डिजाइन - हामीसँग आउने ब्लगको पुनः डिजाइन छ जुन हामी बिस्तारै परिचय दिन गइरहेका छौं। यसले हामीलाई ब्लगको तुलनामा डिजिटल प्रकाशन जस्तै धेरै देखिने बनाउँदछ, जुन प्रयोगकर्ता इन्टरफेस र डिजाइन विशेषज्ञहरू द्वारा डिजाइन गरिएको छ बाहिर निस्किनुहोस् ११। म तल पूर्वावलोकन समावेश गर्दैछु!
सामग्री सुधारहरू - हामी टिम र टेक्नोलोजीसँग नजिकबाट काम गर्दैछौं आणविक पहुँच हाम्रो सामग्री ट्युन गर्न र हाम्रो पाठकहरु संग अधिक संलग्नता ड्राइभ गर्न। हामीसँग कपिराइटरहरूसँग केहि राम्रो साझेदारी छ जुन हामी विस्तार गर्न खोज्दैछौं हाम्रो सामग्रीलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्न।
नेतृत्व क्याप्चर - हामीसँग पाठकहरू छन् जसलाई मद्दत चाहिन्छ र कहाँ जान्छ भनेर थाहा छैन। हाम्रो पुन: डिजाइनमा फाराम क्याप्चर र समाधान एकल पोष्टसँग साझेदारी गरिएको छ। मद्दत चाहिन्छ र तपाइँ यसको लागि सोध्न सक्षम हुनुहुनेछ - हाम्रो टीम वा हाम्रा साझेदारहरू मध्ये एकमा सिधा जान।
पोडकास्ट - हामी हाम्रो पोडकास्टमा धेरै मानिसहरूका साथ धेरै अधिक उद्योग पेशेवरहरू र मार्केटरहरू प्राप्त गर्न काम गरिरहेका छौं साइट रणनीति। हामी हाम्रो साइटहरू र ईमेल प्रोग्रामहरू मार्फत कार्यक्रमहरू प्रबर्धन गर्ने धेरै राम्रो काम गर्नेछौं। पोडकास्ट एक धेरै व्यक्तिको पुग्दै छ र हामीले हाम्रो साइट र अनुप्रयोगहरूमा यसलाई ईन्जेक्शनको राम्रो काम गर्नु पर्छ।
मोबाइल अनुप्रयोग - दुर्भाग्यवश, हाम्रो अनुप्रयोग निर्माण गर्ने मोबाइल अनुप्रयोग कम्पनीले उनीहरूको व्यवसायको त्यो अंश बन्द गर्दैछ, त्यसैले हामी नयाँ ईन्जिनियरि onमा नयाँवर्षको लागि काम गरिरहेका छौं जुन हाम्रो साइटले गर्दछ विज्ञापन र लिड क्याप्चर समावेश गर्दछ।
webinars - हामी हाम्रो ग्राहक प्रेम गर्दछौं ReadyTalk, र तपाइँको व्यापार र मार्केटिंग टेक्नोलोजी आवश्यकताको साथ मद्दत गर्न प्रत्येक एक महिनाको लागि वेबिनरहरू विकास गर्न काम गर्दै हुनुहुन्छ!
घटनाक्रम - गत वर्ष हामीले शहरको इण्डियानापोलिसमा एउटा अचम्मको घटना आयोजना गर्यौं जुन २ 250० भन्दा बढी सहभागीहरूलाई परोपकारका लागि पैसा जुटाउन आकर्षित गर्‍यो। हामी यहाँ ठूलो बनाउँदैछौं कि इन्डियानापोलिसमा ठूलो कार्यक्रम बनाउने - विशेष गरी जब सेल्सफोर्सले यसको जडान सम्मेलन न्यूयोर्कमा सार्दै छ। हामी अझै पनी विश्वास गर्छौ कि मिडवेस्ट मार्केटि and र टेक्नोलोजी सम्मेलनको लागि यहाँ एउटा आश्चर्यजनक अवसर छ। हामीले संलग्न गरेको संगीत उत्सव एक उत्कृष्ट थप थियो!
भिडियो - हामीले सुरू गर्‍यौं मार्केटिंग क्लिपहरू र हाम्रा पोडकास्टहरू संयोजनका साथै हाम्रा पाठकहरूलाई मद्दत गर्नको लागि भिडियोहरूको नियमित स्ट्रिमहरू प्रकाशित गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी समन्वय गर्न कोशिस गर्दैछौं र अन्य उद्योग साझेदारहरूसँग बाहिर काम गर्न को लागी, जस्तै सोशल मिडिया परीक्षक, को सामग्री मार्केटिंग संस्थान, CopyBlogger, मार्केटिंगप्रोफ्स, मार्केटिंग शेर्पा, नयाँ मिडिया एक्सपो, चीफ मार्केटिंग टेक्नोलोजिस्ट, र विभिन्न संगठनहरू। यी संगठनहरूका उत्कृष्ट शिक्षा स्रोतहरू, विशेषज्ञता, अनलाइन सम्मेलनहरू, र वार्षिक कार्यक्रमहरू जुन हामी समर्थन गर्न र हाम्रो आफ्नै समुदायको साथ प्रचार गर्न चाहान्छौं।
एजेन्सी दृष्टिकोणबाट, DK New Media २०१er मा मार्केटिंग प्लेटफार्महरू, मार्केटि companies कम्पनीहरू, मार्केटि technology टेक्नोलोजी प्रदायक र टेक्नोलोजी कम्पनीहरूसँग मात्र काम गर्दै, हाइपर-फोकस भएको छ। जेन लिसाक (अब एक पार्टनर) र म मार्केटि Technology टेक्नोलोजी ब्रान्डलाई स्पटलाइटमा धकेल्दै छु र दृश्यता कम गर्दैछु DK New Media.
के मैले पुन: डिजाइन उल्लेख गरे? यहाँ लुकेका चोटी छ। यो पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनेछ ताकि हामी हाम्रो मोबाइल वेब प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव सुधार गर्न सक्दछौं जुन दिन बढ्दैछ! सबै साइट पृष्ठहरू डिजाइन गरिएको छ र विकासकर्ताहरूले काम सुरू गरिसकेका छन्!
टैग: आणविक पहुँचसामग्री सुधारसामग्री मार्केटिंग संस्थानcopybloggerघटनाहरूनिकास 31१नेतृत्व क्याप्चरमार्केटिंग ब्लग पुन: डिजाइनबजार सम्मेलनमार्केटिंग पोडकास्टबजार टेक्नोलोजीमार्केटिंग टेक्नोलोजी संघमार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लगमार्केटिंग वेबिनारहरूमार्केटिंग प्रोफाइलमार्केटिंग शेर्पामध्य पश्चिममोबाइल अनुप्रयोगmtmwनयाँ मिडिया एक्सपोसाइट पुन: डिजाइनसाइट रणनीतिसोशल मिडिया परीक्षकwebinars
के तपाईं डिजिटल हस्ताक्षर र एक E-हस्ताक्षर बीच भिन्नता थाहा छ?
मार्केटिंग टेक बोगको सफल संचारको हिस्सा हुन ठूलो। यो बृद्धि र साझेदारीको ठूलो वर्ष हो, र हामी भविष्यको लागि हाम्रो योजनाहरूको बारेमा उत्साहित छौं। तपाईंको ब्लगको सफलता तपाईंको फोकसको प्रमाण हो, डग। हामीसँग लक कदममा हुन पाएकोमा खुशी छौं किनकि हामी राम्रो जानकारीको साथ डिजिटल मार्केटिंग फ्रन्टियरलाई उज्यालो पार्दछौं!
इरिक इर्नोल्ट (@ इर्नौल्ट)
बधाई डग! त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन कि तपाईं तातो स्थानमा हुनुहुन्छ, र ती प्रयोगकर्ताहरू हराउँदछन् जब उनीहरूको आवश्यकताको लागि सही उपकरण छनौट गर्न आउँदछन्। तपाईं फ्रिज सादृश्यको साथ पनि स्पट हुनुहुन्छ, यसलाई love लाई माया गर्नुहोस्